Shiinaha Vertical Raidial Bidirection Extruder warshad mashiinka tuubbada iyo alaab-qeybiyeyaasha | BAOTE
Rainbow Tech wuxuu soo saaray taxanaha Mashiinnada tuubbada shubka ah ee labada dhinac iyadoo maskaxda lagu hayo soo saarayaasha. Naqshadeynta waxyaabaha ku habboon ee isticmaalaha ayaa u oggolaaneysa helitaanka adeegga ee fudud, dayactirka joogtada ah iyo beddelka degdegga ah ee lifaaqa. Waqtiga nadiifinta waa la yaraaday maxaa yeelay waxaa jira wax yaroo daadanaya. Qolofta aasaaska godka birta ayaa yareyneysa waqtiga rakibidda si mashiinku u soo galo wax soo saarkiisa si dhakhso leh.
Rainbow Tech wuxuu soo saaray taxanaha Mashiinnada tuubbada shubka ah ee labada dhinac iyadoo maskaxda lagu hayo soo saarayaasha. Naqshadeynta waxyaabaha ku habboon ee isticmaalaha ayaa u oggolaaneysa marin u helidda adeegga, dayactirka joogtada ah iyo beddelka degdegga ah ee lifaaqa. Waqtiga nadiifinta waa la yaraaday maxaa yeelay waxaa jira wax yaroo daadanaya. Qolofta aasaaska godka birta ayaa yareyneysa waqtiga rakibidda si mashiinku u soo galo wax soo saarkiisa si dhakhso leh
Xagga sare mashiinada tuubada RCC ee loo isticmaalo wax soo saarka tuubbada Bullaacadda iyo soo saarida dhuumaha la taaban karo ee qallalan.
Qalabka mashiinka tuubada la taaban karo ee hore ayaa soo saari kara shubka iyo xoojinta tuubada bullaacadaha, laamiyada sanduuqa la taaban karo ee la xoojiyay,
dhuumaha wasakhda ah ee bullaacadda ah, kormeerka ceelka si fiican, godadka godadka iwm, oo si ballaadhan loogu isticmaalay mashruuca kaabayaasha dhulka hoostiisa
Soo bandhig shirkadeenu waxay soo saari kartaa dhammaan noocyada kala-goysyada caaryada isku xidha,
sida Wadajirka Flush (Butt Joint), Rinjiga Rinjiga Rinjiga, wadajirka isku xidha, godka gambaleysan, wadajirka gidaarka, Tuubooyinka riixaya, Tuubbada tuubada iwm haddii ay jiraan shuruudo gaar ah, waxaan sidoo kale awood u leenahay caadada ku habboon
mashiinka tuubada la taaban karo ee macaamiisheena.
Mashiinnada tuubbada ee Radial Extruder Extruder RCC waxay isku daraan tiknoolajiyadda samaynta tuubbada ee horumarsan Nidaamka tuubbada madax-laba-geesoodka ah ee Bidirectional Roller-ka si ay u soo saarto tuubbo leh xarig silig ah oo la taaban karo, isafgarad hagaagsan iyo muuqaal sare. Waxay soo saari kartaa tuubada dherer isku mid ah oo leh faahfaahin faahfaahsan oo wadajir ah iyo tayo gudaha iyo dibedda ah. Xoojinta dhibaatooyinka qallooca qafiska waa la tirtiraa, taasoo horseed u ah awooda wax soo saarka sare.
Mashiinka Samaynta biibiile la taaban karo oo taagan Radial Radial Press, Waa mashiinka tuubbada ugu caansan 300-1200mm dhexroor, dherer 1-3m.
Waa otomaatig sare, iyo awood weyn, ma jiro wax wasakh ah oo wasaqeysan inta wax soo saarku fududahay in la shaqeeyo, iyo shaqaale aad u tiro yar, kaliya waxay ubaahan yihiin daaweyn dabiici ah, si deg deg ah u-caaryada isla markaaba. waxaa aad iyo aad u soo dhoweeyay macaamiisha adduunka oo dhan. Nidaamka elektaroonigga ah oo dhan iyo nidaamka hidda-korontada ayaa labadaba la qaatay koontaroolka dhijitaalka ah, hagaajinta waxqabadka maaraynta iyo xakamaynta saxnaanta mashiinka oo dhan.
Waxay noqon doontaa xulashada ugu fiican ee sameynta dhexroor yar Tuubooyinka RCC 300-1200mm.
mashiinada waxaa lagu heli karaa laba nooc:
• mashiin loogu talagalay dhexroorrada 12 ”- 48” (300 mm - 1200 mm) oo dhererkoodu ugu badan yahay 8 ’ama 12’ (2.5 m ama 3.5 m)
• mashiin loogu talagalay dhexroorrada 12 ”- 60” (300 mm - 1500 mm) oo dhererkoodu ugu badan yahay 8 ’(2.5 m) ama 12’ (3.5 m
Mashiinka kale dhererkiisa waa la heli karaa marka la codsado
Qalabkeeda ka-hortagga, rooga-madaxa, aaladaha isukeenista ayaa iswaafajinaya shubka waxaana xukuma nidaam casri ah oo casriyeysan.
Soo saarida tuubooyin la taaban karo oo waafaqsan dhammaan heerarka caalamiga ah:
tuubooyin la taaban karo
tuubooyin shub ah oo birta lagu xoojiyay
biibiile-birta-xudunta u ah (PCCP) dhererkeedu yahay ilaa 6 m
dhexroor magac u yaal ah oo ka socda DN 225 mm illaa DN 1600 mm
dhererka ilaa 3500 mm
waqtiyada beddelka gaagaaban ayaa dammaanad qaadaya isticmaalka mashiinka ugu habboon.
isku soo koobida barnaamijka.
nidaamka xakamaynta nidaamka isku dhafan.
god mashiinka gacmeed.
xulashooyin dheeri ah: wiish otomaatig ah, nidaamka dabaqa wareegaya, baaritaanka tuubada iyo maaraynta salka salka.
Matoorrada korantada lagu xakameeyo ee isdabajoogga ah oo ay weheliso natiijada gudbinta qalabka casriga illaa iyo taariikhda xawaaraha saxda ah iyo xaddiga sare ee natiijooyinka isukeenista ugu fiican. Dabcan keydinta tamarta iyo heerka ugu yar ee buuqa
Qadarka la taaban karo waxaa horay loogu sii xisaabiyaa, nidaamka xakamaynta habka taxaddarka leh ee loo qaabeeyey waxaana lagu quudiyaa tirooyin iyo sicir sax ah habka wax soo saar. Natiijadu waa tayo la taaban karo oo joogto ah oo ka timaadda godka ilaa miiqda. Si sax ah loogu celin karo wakhti kasta.
Qalabka isugeynta waa aasaaska isafgaradka. Dhaqdhaqaaqa wareega ee miisaanka awgiis, qafiska xoojinta ayaa si fiican loogu dhejiyay shamiito oo qallooca qafiska waa la yareeyay. Dabcan dhammaan qeybaha waxaa loogu talagalay dharka dheer.
Nidaamka Wadista Wareegtada Labada Dhinac
Nidaamka wadista gawaarida laba geesoodka ah waxaa ka mid ah laba darawal oo gudbinta hydrostatic oo madax-bannaan oo loogu talagalay xoojinta gawaarida iyo Longbottom. Nidaamku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo muhiim ah - cutub baabuur-wadis iyo cutub awood u gaar ah. Qaybta korontada ee madaxa ayaa lagu dhejiyay mashiinka mashiinka heerka gudbiyaha si ay u siiso awood wareejin hufan dhinaca isgoyska iyo helitaanka fudud ee adeegga iyo dayactirka.
Haysashada Hopper iyo Conveyor
Awoodda goosashada haynta waxay ku saleysan tahay cabbirka mashiinka, goos gooskuna wuxuu ka kooban yahay geesaha wareegsan si looga hortago wax soo kordha. Xulasho ikhtiyaari ah ayaa la heli karaa si loo wanaajiyo qulqulka maaddada, loo fududeeyo nadiifinta loona kordhiyo nolosha qoob-ka-ciyaarka. Qalabka wax lagu xambaaro ayaa lagu kaydiyaa mashiinka taageerada suunka rollers warshad xiran oo loo saliiday hawlgal dayactir la'aan. Isku-xirka gawaarida waxaa lagu dhejiyaa rollers waxaana si heer sare ah u habeeya kormeeraha mashiinka si ugu fiicnaado quudinta qalabka. Suunka xambaarsan nooca xamuulka oo aan xuduud lahayn oo leh weji duuban ayaa ka hortagaya wax daadinta.
Wareegyada wareega waxay ka kooban yihiin rollers taageero roog ah wareega iyo isku imaatinka rullaluistemadka xudunta iyo taageerada. Jadwalku waa laba qaybood, waxayna kuxirantahay qaabka mashiinka, waxaana kamid ah saldhigyada sameynta biibiile oo leh goos goos si sax ah u yaalo taarikada hoose ee hoos udhaca bedelka dhaqso leh ee lifaaqyada. Ujawaabku waxaa si togan u wadaa matoor koronto ku shaqeeya. Saxanka sagxadda ayaa daboolaya aagga u dhexeeya leexashada iyo dabaqa dhirta si loo fududeeyo nadiifinta.
Hore: Bacda Sumpp Skip
Xiga: Shiinaha jumlada Shiinaha Canvas Ragga Dambiisha Bag Bag Maydka
Mashiinka tuuboyinka la taaban karo
Precast Mashiinka tuuboyinka la taaban karo
Rcc Mashiinka Mashiinka Gawaarida Gaaban
Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah
Mashiinka alxanka qafis
Gawaarida Gawaarida, Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah, U Bolts, Qaab dhismeedka, Hex handarraabbadeedii, Lag Bolts,